FAQ - Shanghai Langyi esebenzayo Materials Co., Ltd.
Yintoni i-antibacterial? Yeyiphi indlela yokusebenza yesenzo se-antibacterial agent?
I-Antibacterial ligama eliqhelekileyo, kubandakanya ukubulala inzala, ukubulala iintsholongwane, ukubulala iintsholongwane, ibacteriostasis, ukungunda, umhlwa, njalo njalo. Inkqubo yokubulala iintsholongwane ngamachiza okanye iindlela zomzimba okanye ukuthintela ukukhula, ukuzala kunye nomsebenzi wentsholongwane kuthiwa yinzalo kunye nebacteriostasis.
Kwii-1960s, uninzi lwabantu lwalusebenzisa iiarhente zokulwa neentsholongwane. Ngophuhliso olunempumelelo lweearhente ezingaphiliyo zokulwa intsholongwane ngo-1984, ukugqitywa kwe-antibacterial kuye kwaphuhliswa ngokukhawuleza, okwenza ii-antibacterial agents zingasetyenziswa kuphela kwifayibha nakwilaphu, kodwa zikwasetyenziswa nakwiiplastikhi, izinto zokwakha kunye nezinye iimveliso.
Kwinkulungwane yama-21, ngokufika koluntu olugugileyo, inani labantu abadala abalala ebhedini kunye nabantu abagcina impilo bekhuselekile, kunye nemfuno yokunakekelwa kwabantu abadala ukuthintela izilonda zokulala nayo inyukile.
Ngenxa yotshintsho olusuka kuluntu olujolise kwimveliso luye kwinto ejolise ebomini, iya kuba sisihloko esibalulekileyo kwixesha elizayo ukuphuhlisa kunye nophando lweemveliso eziluncedo kwimpilo yabantu nakwimo engqongileyo yomhlaba.
Okwangoku, zintathu iindlela eziphambili zokulwa neentsholongwane: ukukhutshwa okulawulwayo, umgaqo wokuhlaziya kunye nomqobo okanye isithintelo.
Isicelo sangoku se-antimicrobial ezifanelekileyo sijikeleze ukhuseleko kunye nentuthuzelo yesicelo, kunye nokuqina kokusebenza. Ngokunyusa ulwazi loluntu malunga nokukhuselwa kwendalo, ii-antimicrobial agents ziye zatsala ingqalelo engakumbi, enje nge-chitosan kunye ne-chitin, njl.njl. Nangona kunjalo, iiarhente zendalo zokulwa ne-antimicrobial zinentsilelo ebonakalayo ekuchaseni ubushushu kunye nokuqina kwentsholongwane. Nangona ii-antimicrobials zisetyenziswa kakhulu, zineziphene kukumelana nobushushu, ukukhutshwa kukhuseleko, ukunganyangeki ngamachiza njalo njalo. I-arhente ye-antibacterial engaphiliyo iluhlobo lwe-arhente ye-antibacterial esetyenziswa ngakumbi kwimarike, itekhnoloji ikhule ngakumbi, kwaye inezibonelelo ezibonakalayo ekumelaneni nobushushu, ukhuseleko, ukusebenza kwexesha elide kunye neminye imiba, imeko yentengiso yesicelo elungileyo kakhulu.
I-Shanghai Langyi Functional Materials Co., Ltd. ijolise ekunikezeleni ngezisombululo ezizodwa ezisebenzayo zezinto ze-polymer esekwe kwi-ester, kwaye iyaqhubeka nokubonelela ngeenkonzo zomsebenzi wobomi obajikelezileyo kubathengi beetshiphu. Siye ngokuzimeleyo siphuhlise i-AntibacMax®, i-arhente ye-ion engasebenziyo yentsimbi, ekuphenduleni imeko zentengiso kunye neemfuno zabathengi ezintsha. MakubeMax®inokukhupha ngokuzinzileyo isilivere, zinc, ubhedu kunye nezinye ion ze-antibacterial, kwaye inefuthe elifanelekileyo le-bacteriostatic kwifungi ebanzi ebanzi. Ukunamathela kwisiseko sefilosofi yemveli yaseTshayina- "ubunye besazela, ulwazi kunye nokwenza", inkampani ibonelela ngeemveliso, iinkonzo kunye nexabiso lokunika ingxelo kubathengi, abasebenzi, abanini zabelo, uluntu nakwabanye abathathi-nxaxheba.
Wazi ntoni malunga nee-antimicrobials ezingaphiliyo?
Kwiminyaka yakutshanje, kuye kwakho imeko eyandayo yeziganeko ezimbi ezibangelwa ziintsholongwane. Ngokwendlela esiziqonda ngayo, iintlobo ezininzi zebacteria zisendlwini yangasese, ezinje nge-E.coli, iStaphylococcus aureus, i-staphylococcus emhlophe, i-bacillus subtilis, i-tetralococcus, njl.njl. Izinto ezininzi ekhaya kulula ukuzalisa iibhaktheriya. Ke ngoko, indlela yokuphucula le ngxaki ixhomekeke kwiarhente yintsholongwane.
Kwindalo, zininzi izinto ezine-bactericidal elungileyo okanye umsebenzi othintelayo, njengezinto ezithile eziphilayo ezinamaqela athile, ezinye izinto zentsimbi ezingaphiliyo kunye nezinto zazo, ezinye izimbiwa kunye nezinto zendalo. Kodwa okwangoku, izinto zokulwa ne-antibacterial ngakumbi zibhekisa kwinto enesakhono sokuthintela okanye ukubulala iintsholongwane ngokudibanisa kwezinto ezithile ezibulala iintsholongwane (ezaziwa njengearhente yokulwa neentsholongwane), ezinje ngeplastikhi ebulala iintsholongwane, ifayibha yokulwa nentsholongwane kunye nelaphu, iseramikhi sokulwa, isinyithi esibulala iintsholongwane. izixhobo.
A) Inkqubo yentsimbi yokunxibelelana nokuphendula
Impendulo yoqhakamshelwano ibangela ukutshabalalisa okanye ukungasebenzi kakuhle kwezinto eziqhelekileyo ze-microorganism. Xa i-ion yesilivere ifikelela kwi-membrane ye-microorganism, iyatsalwa ngumkhosi we-coulomb wecala elibi, kwaye ingxowa yesilivere ingena kwiseli, iyadibana neqela le -SH, lenze iprotein idibane kwaye itshabalalise umsebenzi we-synthase.
B) Inkqubo yokuvula esebenzayo
Ezinye izinto ezilandelela isinyithi zinokwenza i-oxidize okanye zisabele ngeeproteni, ii-acid ezingafunyiswanga kunye ne-glycosides kwiiseli zebacteria, ezonakalisa ulwakhiwo lwazo oluqhelekileyo, ngaloo ndlela zibenza bafe okanye baphulukane namandla abo okukhula.
C) Inkqubo yokulungiswa kweCationic
Iibhaktheriya ezihlawuliswe ngokungafanelekanga ziyatsalwa kwi-cations kwizinto zokulwa ne-antibacterial, ezithintela ukuhamba kwazo ngokukhululekileyo kwaye zithintele izakhono zokuphefumla, oko ke kubangele "ukudibana nokufa".
D) Inkqubo yokonakalisa imixholo yeseli, ii-enzymes, iiproteni kunye neecicic acid
Amayeza okubulala iintsholongwane ayasabela kwi-RNA kunye ne-DNA yokuthintela ukungafani kunye nokuzala kwakhona.
Ukujonga imeko yentengiso kunye neemfuno zabathengi abatsha, i-Shanghai Langyis Functional Materials Co, Ltd ngokuzimeleyo iphuhlise i-AntibacMax®, i-arhente ye-antibacterial ye-ion engaphiliyo. MakubeMax®inokukhupha ngokuzinzileyo isilivere, i-zinc, ubhedu kunye nezinye ion ze-antibacterial, kwaye inefuthe elifanelekileyo lokuthintela ukungunda kwintsholongwane ebanzi. Xa kuthelekiswa neearhente ze-organic antimicrobial, AntibacMax® inokumelana ngcono nobushushu, ukukhululwa kwexesha elide, uzinzo lweekhemikhali kunye nokhuseleko.
Yintoni i-masterbatch yeplastikhi yentsholongwane?
I-masterbatch eplastiki yokubulala iintsholongwane yinto entsha yintsholongwane ephuculweyo kwaye yenziwe yitekhnoloji ekhethekileyo. Isetyenziswa kuzo zonke iintlobo zeemveliso zeplastiki, ayinabungozi kumzimba womntu kwaye inefuthe lokulwa neentsholongwane kuzo zonke iintlobo zebhaktheriya eziyingozi kunye nokuvunda.
Emva ekubumbeni ngesibetho, uxinzelelo ekubumbeni, ekubumbeni ngefuthe kunye nolunye uqhubekeko, i-masterbatch yeplastikhi yokubulala iintsholongwane ivelisa izinto zokupakisha ukutya, izinto zonyango, izixhobo zasendlini, izinto zokuhombisa ngaphakathi, izixhobo ezikhethekileyo zekota, izinto zabantwana kunye namanye amanqaku okusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye nezinto zeshishini ezinomsebenzi wokulwa neentsholongwane. .
I-resin esebenzayo: PE, PP, PC, PET, PS, PU, ​​ABS, SAN, TPU, TPE (anti-bacterial, anti-odor, humidity, anion, microwave shielding, infrared scattering function, fiber spinning), izixhobo ezizodwa.
I-antibacterial plastic masterbatch
Amanqaku: akukho tyhefu ngomlomo, akukho buhlungu kulusu, akukho tyhefu kwindalo; Akukho mahomoni okusingqongileyo; Ukuqinisekisa anti-bacteria, anti-ukungunda isiphumo; Ngokusebenza okuphezulu kunye nokubanzi okubanzi kwe-anti-bacteria, anti-mold, ukusebenza kwe-anti-algae; Iziphumo ezingapheliyo zokulwa neentsholongwane; Ukukhanya elungileyo kunye nokhuseleko ubushushu;
Isicelo: iimveliso zombane, iimfuno zemihla ngemihla, izinto zonyango, izinto zabantwana, iinxalenye zemoto, izinto zokupakisha ukutya, izinto ezikhethekileyo zekota, njl.
I-Shanghai Langyi Functional Materials Co., Ltd. ijolise ekunikezeleni ngezisombululo ezizodwa ezisebenzayo zezinto ze-polymer esekwe kwi-ester, kwaye iyaqhubeka nokubonelela ngeenkonzo zomsebenzi wobomi obajikelezileyo kubathengi beetshiphu. ULangyi ujonga "ukuveliswa kwetekhnoloji" njengesiseko sophuhliso lwamashishini kwaye ukhuthaza uqeqesho olumanyanisiweyo lwamacandelo amaninzi. Sityala imali ngaphezulu kwe-10% yengeniso yethu kwi-R & D minyaka le, kwaye sakha iqela le-R & D elitsha elinamandla obuchwephesha kunye neYunivesithi yaseFudan, iYunivesithi yaseDonghua kunye nezinye iiyunivesithi. Siphumelele izihloko ezininzi ezibekekileyo ezinje nge- "Shanghai Advanced Enterprise", "iShishini leShishini eliPhezulu lobuchwephesha", "iShanghai iJolise kwiShishini elitsha elincinci neliphakathi" njalo njalo.
Ummeli wePolymeric Antihydrolysis, Antibacterial Masterbatch, Antibacterial ingubo ephothiweyo, Intambo ye-Antibacterial, I-Masterbatch ye-Antibacterial Melt-Blown Masterbatch, Antibacterial Electret Masterbatch,